RetroPie: သင်၏ Raspberry Pi ကို retro-gaming machine သို့ပြောင်းပါ အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ
RetroPie: သင်၏ Raspberry Pi ကိုဂိမ်းကစားစက်အဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ပါ
အကယ်၍ သင်သည် retro ဗီဒီယိုဂိမ်းများ၊ စတိုင်ဖြင့်ဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲသည့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဂန္ထဝင် retro ဂိမ်းများကိုစိတ်ထက်သန်နေလျှင် Raspberry Pi ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ပေါ်ထွက်လာသောစိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသော emulators နှင့်ပရောဂျက်များအားသင်သေချာစွာရှာဖွေသည်။ retrogaming ကိုခံစားရန်ထိုစီမံကိန်းများ၏နောက်ထပ်တစ်ခုဖြစ်သည် RetroPieနှင့်သော့အပေါင်းတို့ကိုငါထုတ်ဖေါ်ပါလိမ့်မယ်။
အမှန်တရားကဒီ c စီမံကိန်းကတည်းကဒီအမျိုးအစားကိုပိုပြီးစိတ်ဝင်စားလာတယ်အသုံးပြုသူများ၏အသိုင်းအ ၀ ိုင်းသည်ဤဗီဒီယိုဂိမ်းများကိုစိတ်အားထက်သန်သည် အတိတ်ပလက်ဖောင်းကနေကြီးထွားလာရပ်တန့်မထားဘူး။ စင်ကာပူ၊ SEGA နှင့် Atari ကဲ့သို့သောထုတ်လုပ်သူအချို့ပင်သူတို့၏ကြီးမားသောလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်သူတို့၏အတိတ်စက်ပစ္စည်းအချို့ကိုဒုတိယအခွင့်အရေးပေးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
သင်လည်းသိရန်စိတ်ဝင်စားပေမည် အကောင်းဆုံး emulators Raspberry Pi အတွက်အခြားစီမံကိန်းများအတွက်ပါ recalbox ကို y Batocera။ ပြီးတော့သင့်ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးရန် Controller များအတွက် gadget အချို့လည်းရှိသည် arcade စက်.
1 RetroPie ဆိုတာဘာလဲ။
2 RetroPie ဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။
2.1 အများကြီးပိုလွယ်သည် (အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောအသုံးပြုသူများ)
2.2 ROM တွေကိုရှာပါ
3 ရရှိနိုင် add-ons တွေကို
RetroPie ၏စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည် open source ဖြစ်ပြီး သင်၏ SBC ကို retro video game စင်တာတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲရန်အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်၊ ထို့အပြင်၎င်းသည်အမျိုးမျိုးသောဗားရှင်းများတွင် Raspberry Pi ကဲ့သို့သော board များ၊ ODroid C1 နှင့် C2 ကဲ့သို့သော PC များနှင့် PC များအတွက်ပင်သဟဇာတဖြစ်သည်။
RetroPie 4.6 ဗားရှင်းကတည်းက Raspberry Pi4ကိုထောက်ပံ့မှုလည်းပါဝင်သည်
ဤစီမံကိန်းသည်အခြားလူသိများသောလက်ရှိစီမံကိန်းများအပေါ်တွင်တည်ဆောက်သည် Raspbian, EmulationStation, RetroArch, Kodi နှင့်အခြားသူများ အများအပြားရှိသည်။ ဤအရာအားလုံးကိုသင်အကြိုက်ဆုံး Arcade ဂိမ်းများကစားခြင်းအတွက်သာစိတ်ပူရန်သင့်အားပြီးပြည့်စုံသောရိုးရိုးပလက်ဖောင်းတစ်ခုကမ်းလှမ်းရန်တစ်ခုတည်းသောဗဟိုစီမံကိန်းတစ်ခုတွင်စုစည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်အဆင့်မြင့်သောအသုံးပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည် configuration tools အမျိုးမျိုး ထို့ကြောင့်သင်အလိုရှိသည့်အတိုင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ပြီးစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
RetroPie အတုယူနိုင်သည် ဗွီဒီယိုဂိမ်းပလက်ဖောင်း ၅၀ ကျော် ဒါကြောင့်ဒီနေ့သူတို့ကိုပြန်လည်ရှင်သန်ရန်သူတို့၏ဂိမ်းများ၏ ROM များကိုသုံးနိုင်သည်။ လူသိအများဆုံးကတော့
Play Station က 1
ဂိမ်း Boy အရောင်
ကို Nintendo 64
သင်လုပ်နိုင်သည် RetroPie ကို download လုပ်ပါ လုံးဝအခမဲ့ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေ စီမံကိန်း၏။ RetroPie ဟာနည်းလမ်းများစွာနဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာသတိပြုသင့်ပါတယ်။
၎င်းကို Raspbian ကဲ့သို့သော operating system တွင် install လုပ်ပါ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက Rasbpian y Debian / Ubuntu.
ခြစ်ရာကနေ RetroPie ပုံရိပ်နှင့်အတူစတင်နှင့်အပိုဆောင်း software ကိုထည့်ပါ။
ဒီဘက်စုံသုံးအပြင် နောက်ကိုလိုက်ရန်ခြေလှမ်းများ RetroPie ကို SD ကနေ install လုပ်နိုင်ဖို့အောက်မှာဖော်ပြထားပါတယ် - \_ t
ပုံကို download လုပ်ပါ de RetroPie သင်၏ Pi ဗားရှင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
ယခုသင် .gz တွင် compressed ပုံကို extract လုပ်ရမည်။ ၎င်းကို Linux မှ command များသို့မဟုတ် 7Zip ကဲ့သို့သော program များဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ရလဒ်နှင့်အတူဖိုင်တစ်ဖိုင်ဖြစ်သင့်သည် .img extension ကို.
ပြီးရင် program ကိုသုံးပါ SD ကို format နဲ့ပုံကိုရှောက် RetroPie ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ မင်းလုပ်နိုင်တယ် etcher၎င်းသည် Windows၊ macOS နှင့် Linux နှစ်ခုလုံးနှင့်လည်းသဟဇာတဖြစ်သည်။ ဤသူအပေါင်းတို့သည်တူညီသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြစ်ပါတယ်။
သင်၏ SD ကဒ်ထဲသို့သွင်းပါ Raspberry Pi စတင်ပါ။
ပြီးတာနဲ့အပိုင်းကိုအတွက် configuration menu ကိုသွားပါ ဝိုင်ဖိုင် သင်၏ SBC ကို network သို့ချိတ်ဆက်ရန်။ သင့်တွင်သက်ဆိုင်ရာ network adapter ကိုပြင်ဆင်ပါ၊ သင့်တွင် USB WiFi adapter ပါ ၀ င်သော board တစ်ခုရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်၊ သို့မဟုတ်သင်တွင်ပေါင်းစည်းထားသော WiFi ပါရှိသည့် Pi သို့မဟုတ် RJ-45 (Ethernet) ကေဘယ်လ်နှင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ သင်၏ရွေးချယ်မှုကိုရွေးချယ်ပြီးသင်၏ပုံမှန်ကွန်ယက်ကိုဆက်သွယ်ရမည်။
အကယ်၍ သင်နှစ်သက်ပါက၊ များသောအားဖြင့်မလိုအပ်သော်လည်း၊ သင်သည်ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (သို့) အခြား emulators များထပ်ထည့်နိုင်သည်။
ပြီးတာနဲ့အောင်မြင်, အောက်ပါဖြစ်ပါတယ် သင့်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုကို configure (သို့) ဂိမ်းကစားသူများရှိလျှင်၊ ဤသို့ပြုလုပ်ရန်အဆင့်များမှာ -
USB Controller ကိုဆက်သွယ်ပါ မင်းမှာရှိတယ် Amazon မှာ RetroPie နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ Controller တွေအများကြီးရှိတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် QUMOX သို့မဟုတ် နောက်တစ်ခု။ သငျသညျအခြို့သောအသစ်များ Controller ကိုသုံးနိုင်သည်။
ဆက်သွယ်ပြီးသောအခါ၊ RetroPie သည်အလိုအလျောက်စတင်သင့်သည် သူတို့ကို configure လုပ်ဖို့ interface ကို။ ၎င်းတွင်၎င်းသည်သင်လိုက်နာရမည့်လက်ထောက်တစ် ဦး မှလုပ်ဆောင်ချက်များစွာကိုတောင်းလိမ့်မည်။ အမှားတစ်ခုလုပ်မိလျှင်စိတ်ပူစရာမလိုပါ၊ Start သို့မဟုတ် F4 ကို နှိပ်၍ ပြန်လည်စတင်ခြင်းဖြင့်ပြင်ဆင်ခြင်းကိုပြင်ဆင်ရန် menu ကိုနောက်မှသင်ဝင်ရောက်နိုင်သည်။
ပြီးတဲ့နောက်မင်းလုပ်နိုင်တာက အဆိုပါ ROMs ရှောက်သွားပါ သင်၏အကြိုက်ဆုံးဗီဒီယိုဂိမ်းများကို Raspberry Pi မှဖွင့်ရန်အဆင်သင့်ရှိသည်။ သင်ကနည်းလမ်းများစွာဖြင့်လုပ်နိုင်သည်၊ တစ်ခုမှာ SFTP (အနည်းငယ် ပို၍ ရှုပ်ထွေးသည်)၊ Samba (ပို၍ အလုပ်ကြိုးစားသူ) မှတဆင့်ဖြစ်သည်၊ နောက်တစ်ခုမှာ USB မှတစ်ဆင့် (ရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီးအများစုမှနှစ်သက်သည်) ။ USB ရွေးစရာအတွက်
FAT32 သို့မဟုတ် NTFS တွင်ယခင်ကပုံစံချထားသော pendrive သို့မဟုတ် USB မှတ်ဉာဏ်ကိုသုံးပါ။ နှစ် ဦး စလုံးအစေခံ။
အတွင်းပိုင်း၌သင်လုပ်ရမည် « retropie »ဟုခေါ်သောဖိုလ်ဒါ မျက်တောင်အဖွင့်အပိတ်မရှိဘဲ။
ယခုလုံခြုံစိတ်ချရသော USB ကိုဖြုတ်လိုက်ပါ USB port ကို အဆိုပါ Raspberry Pi ၏။ LED မီးမထိုးမှီတိုင်အောင်ထားပါ။
ပြီးရင် USB ကို Pi နဲ့ချိတ်လိုက်ပါ။ ပြီးတော့ PC ကိုထားပါ အဆိုပါ ROMs ရှောက်သွားပါ အဆိုပါ retropie / roms directory ကိုအတွင်းပိုင်း။ အကယ်၍ ROM များသည် compressed ဖြစ်ခဲ့ရင်သူတို့အလုပ်လုပ်ဖို့သူတို့ကို unzip လုပ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်။ ROMs အတွင်းပလက်ဖောင်းများကိုပလက်ဖောင်းဖြင့်စာရင်းပြုစုရန်အတွက်သင်လည်းဖန်တီးနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် - Nintendo NES ဂိမ်းများအတွက် nes ဖိုလ်ဒါတစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်သည်။
USB ကိုသင်၏ Pi ထဲသို့ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပါ၊ LED မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ရပ်တန့်ရန်စောင့်ပါ။
ယခု EmulationStation ကို refresh လုပ်ပါ ပင်မ menu မှ Restart ရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်။
ယခုမှာသာရှိ၏ ဂိမ်းကိုစတင်ရန်စကားမစပ်၊ သင်ဗတ္တိဇံကိုပေးသောဂိမ်းတစ်ခုမှထွက်ရန်သင်သည်သင်၏ဂိမ်း Controller တွင်တစ်ချိန်တည်းနှိပ်ထားသော Start နှင့် Select ခလုတ်များကိုသုံးနိုင်သည်။ ၎င်းသည် RetroPie ၏အဓိက menu သို့ပြန်သွားလိမ့်မည်…
Si မင်းဘဝကိုအရမ်းရှုပ်ထွေးစေချင်တယ် ROMs နဲ့ဒါမှမဟုတ် RetroPie ထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်၊ သူတို့ကဒီစနစ်တပ်ဆင်ထားပြီးတဲ့ SD ကဒ်များကိုရောင်းပြီးသားဖြစ်ကြောင်းသင်သိသင့်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်, အတွက် အမေဇုံ တစ်ခုရောင်း 128GB microSD ကဒ် Samsung အမှတ်တံဆိပ်၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုနှင့်၎င်းတွင် RetroPie ပါဝင်ပြီးဗွီဒီယိုဂိမ်းပေါင်း ၁၈၀၀၀ ကျော်ပါဝင်သည်။
အင်တာနက်ပေါ်တွင်ခွင့်ပြုထားသည့်ဝဘ်စာမျက်နှာများစွာရှိသည်ကိုသတိရပါ ROM တွေကို download လုပ်ပါ သူတို့ကစီးပွားဖြစ်ဗီဒီယိုဂိမ်းများဖြစ်သောကြောင့်တရားမဝင်။ ထို့ကြောင့်၊ သင်သည်ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုကိုဆန့်ကျင်သောရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်နေကြောင်းသိထားခြင်းဖြင့်သင်၏စွန့်စားမှုဖြင့်ပြုလုပ်ရမည်။
ထို့အပြင်အတွက် အင်တာနက်ကမော်ကွန်းတိုက် သင်သည်ဗီဒီယိုဂိမ်းအချို့ ROM များကိုလည်းတွေ့နိုင်သည်။ နှင့်သင်တန်း၏သငျသညျလညျးရှိသည် လုံးဝအခမဲ့ ROM များ သူတို့ကိုသင်လိုချင်လျှင်တရားဝင်ဖြစ်လိမ့်မည် MAME.
ရရှိနိုင် add-ons တွေကို
များစွာသောအရေအတွက်ရှိသည်ကိုသင်သိသင့်သည် DIY စီမံကိန်းများ Raspberry Pi ဖြင့်ကိုယ်ပိုင်စျေးပေါ။ အသေးအဖွဲ Arcade စက်ကိုဖန်တီးရန်နှင့်အတိတ်မှအခြား console များစွာကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းပုံစံဖြင့်ဖန်တီးရန်။ ၎င်းအတွက် RetroPie သည်သင့်အားစိတ် ၀ င်စားဖွယ်စာရွက်စာတမ်းများလည်းပေးသည်။
အဆိုပါ acrylic shell ကိုများအတွက် DIY
သို့သော်သင်၏လက်ချောင်းထိပ်များ၌တစ်ခုတည်းသောအရာမဟုတ်၊ ၎င်းတို့လည်းတည်ရှိသည် အလွန်စိတ်ဝင်စားဖို့ပစ္စည်းများ သင်၏ retro console ကိုလွယ်ကူစွာတပ်ဆင်ရန်သင် ၀ ယ်နိုင်သည်။
GeeekPi SuperCOM ကိုတုပသည့် retro console shell တစ်ခု
NSPi ၎င်းသည်ဒဏ္myာရီဆန်သော Nintendo NES ကိုတုပသည့်အမှုနောက်တစ်ခုဖြစ်သည်
Owootecc Raspberry Pi Zero အတွက် GameBoy ကဲ့သို့သောအမှု
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ » Raspberry Pi » RetroPie: သင်၏ Raspberry Pi ကိုဂိမ်းကစားစက်အဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ပါ
Odroid N2: Raspberry Pi အတွက်အကောင်းဆုံး SBC စနစ်